Periodismo de Barrio: Mitondra fiovàna ho an’ny Media Kiobàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jolay 2019 13:16 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Desambra 2017)
Elaine Diaz miresaka momba ny “Periodismo de Barrio”, famoahambaovao iray mandrakotra ny momba ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro ao Kiobà. Sary an'i Gwenaelle LeFeuvre.
Elaine Diaz, mpandray anjara fahiny tao amin'ny GV Cuba, manazava ny nahatonga ilay horohorontany tao Nepal hanosika azy hisaina momba ny fanangonambola eny ifotony, saingy amin'ny endriny iray vaovao, tamin'ny fandrosoana andianà tranga vitsivitsy izay mety hiafara amin'ny famoronana ny Periodismo de Barrio, fikambanana tsy miankina mpampita vaovao.
Mandehana any amin'ny fiandohan'ity resadresaka ity ao amin'ny tahirinay Livestream ao amin'ny YouTube »
«Jereo ato ny lisitra feno ahitàna ireo lahatsary rehetra tamin'ny Vovonana
Tamin'izany fotoana izany i Diaz dia vao avy nifindra nankany Boston ary, sambany, nandritra ireo fotoana nisian'ilay loza voajanahary, nanatri-maso ny fomba nihetsehan'ny olona tamin'ny alàlan'ny fanentanana tolotànana tety anaty tambajotra. Naharavo azy ‘ity fomba vaovao natao hanatonana ny olona any lavitra any ity, zavatra iray izay tsy vitan'ny Paypal na ireo endrika hafa natao hifanampiana fony izy tao Kiobà. Herinandro iray taty aoriana, niafara tamin'ny fidarabohan'ireo tranobe ireo ora-nikija tao Kiobà, ary nanontany tena i Elaine raha toa ny fanentanana iray atao hanangonambola eny ifotony ka mety hidona any amin'ireo Kiobàna mpila ravinahitra any Miami ka mety ho afaka manampy.
Nosoratan'i Diaz ny momba ny hevitra iray hanangonana vola eny ifotony ho an'ny ezaka famonjena ary nadabok'ireo Kiobàna am-pielezana. Avy eo dia nafantony tamin'ny famoronana fikambanana iray tsy miankina mpampita vaovao avy ao anatin'i Kiobà ny ezaka nataony, ny Periodismo de Barrio, izay hiasa manodidina ny resaka olana momba ny fiovaovan'ny toetrandro ao amin'ilay firenena. Taorian'ny namoahany ny fisianà toerana vonona handraisana mpiasa efatra monja, 96 ny firotsahana voarainy. Araka izay nilazan'i Diaz azy tamin'ny vazivazy hoe,
“…betsaka mpanao gazety adaladala ao Kiobà”.
Manana gazety telo ny fanaovana gazety nentindrazana ao Kiobà, izay samy mandrakotra tantara mitovy avokoa. Ny Periodismo de Barrio dia iray amin'ireo mpamoaka vaovao tsy miankina vitsy an'isa manomboka mandrakotra ireo tantara izay tsy avoakan'ireo gazety efa nahazatra. Miaraka amin'ny tanjona handrakotra ireo tantara tsy dia itodihana loatra, nanapaka hevitra ilay vondrona hoe ilain-dry zareo ny manoratra momba ny fiantraikan'ireo tafiotra mahery namely tao Guantanamo. Nanapaka hevitra i Diaz ny hampiasa ny lasitra fanangonana vola avy eny ifotony izay hainy nandritra ny naha-tao Boston azy ,ary nanomboka ny fanentanana voalohany ho an'ny Periodsimo de Barrio mba hanangonana tahiry hanaovana ilay fandrakofam-baovao.
Noho ny fifandraisana nanahirana nisy tamin'i Etazonia sy Kiobà, naaton'ny PayPal izay kaonty rehetra misy hafatra milaza ny hoe Kiobà. Na izany aza, tamin'ny alàlan'ny fanampiana nataon'ny nàmana iray ao Kanadà, vitan-dry zareo ny nandingana io olàna io ary nahangona $2000 tao anatin'ny 72 ora latsaka monja. Nandeha nankany Guantanamo i Diaz sy ny tariny, nefa avy eo notànan'ireo manampahefana kiobàna nandritra ny andro roa ilay vondrona. Lasa mahazatra ireny fitazonana mandritra ny fotoana fohy ireny ho an'ireo kiobàna mpanao gazety.
Na nisy aza ny olana, nitondra fiovàna ny Periodismo de Barrio. Nandeha nanatrika atrikasa iray momba ny olan'ny rano, natao tany Kôlômbia, ny mpanao gazety iray tao amin'ilay fikambanana, ary niverina hitarika ny ezaka iray hiatrehana ny tsy fahampian-drano manerana ilay nosy.. Tantara 33 no navoakan-dry zareo, iray isaky ny fanjakàna, nanoratana momba ireny olana fototra ireny.
Manamarika koa i Diaz hoe manomboka manana safidy ry zareo Kiobàna. Fony izy mbola tanora, ny hany safidiny dia ny hiasa aminà tranom-panjakàna. Ankehitriny ireo mpanao gazety dia manana safidy hanaraka fampianarana any amin'ny firenena hafa, ary betsaka no mandao ny firenena. Ampahany amin'ny tanjon'ny Periodismo de Barrio ny hanome ireo Kiobàna mpanao gazety ny vintana hijanona an-tanindrazana ary hanorina media iray matanjaka sy tsy miangatra.
“Faly aho fa anananay ny olona misafidy ny hijanona an-tanindrazana fa tsy mandeha mandao ny firenena toy ny nataon-dry zareo tany aloha.”